को बन्ला संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपति ? |
को बन्ला संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपति ?
काठमाडौं,पुस, ५, विगत पाँच महिनादेखि नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा पदाधिकारीविहिन छ । भक्त श्रेष्ठ (सरुभक्त) नेतृत्वको कार्यसमतिको कार्यकाल गत भदौंमा सकिएपछि एकेडेमी पदाधिकारीविहीन भएको हो । सरकारले एकेडेमीमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले वरिष्ठ नाटककार प्रचण्ड मल्लको संयोजकत्वमा छनोट समिति समेत गठन गरेको छ । तर अहिलेसम्म उक्त समितले कुनै पनि नाम सिफरिस गरेको छैन ।
सो समितिले संस्कृति मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई छिट्टै नाम सिफारिस गर्ने तयारी गरेको मन्त्रालय श्रोतले जानकारी दिएको छ । श्रोतका अनुसार एकेडेमीको कुलपतिका लागि गायक तथा संगीतकार रामेश श्रेष्ठ, निर्देशक यादव खरेल र संगीतकार शम्भुजित बास्कोटाको नाम अगाडि छ ।
तीनमध्ये खरेल निर्देशक र गीतकार पनि हुन् । तत्कालीन शाही नेपाल चलचित्र संस्थानको महाप्रबन्धक र नेपाल परिवार नियोजन संघको कार्यकारी प्रमुख, कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका पालामा चलचित्र विकास बोर्डको कार्यकारी अध्यक्ष समेत बनेका खरेल दुई वर्षअघि उनलाई सञ्चार मन्त्रालयले नेपाली चलचित्र सम्बन्धी नीति तयार पार्न संयोजक नियुक्त गरेको थियो ।
उमेरले धेरै पाका खरेल अहिले सार्वजनिक कार्यक्रममा कमै देखिने गर्दछन् । प्रेमपिण्ड, लोभीपापी, श्रीस्वस्थानी, भानुभक्त, हत्तेरिका लगायत फिल्म निर्देशन गरेका छन् । यस्तै यसअघि संगीत तथा नाट्य एकेडेमीको उपकुलपति रहिसकेका संगीतकार शम्भुजित बास्कोटा पनि कूलपतिको सूचिमा रहेका छन् । सरुभक्त कूलपति भएका बेला उनी उपकुलपति थिए ।
उनी आफ्नो कार्यकालमा कलाकार–स्रष्टालाई परिचयपत्र वितरण, चीन र भारतसँग प्रज्ञा प्रतिष्ठानस्तरमा सहकार्य गर्न सम्झौता, सातै प्रदेशमा अनुसन्धानको काम गरेका कारण उनी कुसल प्रशासकको रुपमा चिनिएका थिए ।
नेपाली सुगम संगीतलाई माथि उठाउन र भारतीय संगीतलाई नेपाली चलचित्रबाट विस्थापित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका उनी अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच राम्रो भएका व्यक्ति हुन् । पञ्चायत कालदेखि समसामाहिक बिषयमा ब्यङ्ग्य प्रहार गर्दै आएका उनले ३४ वर्ष नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा संगीत निर्देशक भई अवकाश पाएका हुन् ।
चलचित्र विकास बोर्डका कार्यकारी अध्यक्ष, नेपाल टेलिभिजनको अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक बनिसकेका उनले सयौँ नेपाली फिल्ममा संगीत भरेका छन् । ऐतिहासिक फिल्म सीमारेखा, सेतो बाघ र बसन्ती लगायतमा समेत उनले संगीत दिएका छन् ।
त्यस्तै रामेश श्रेष्ठ पुराना गायक तथा संगीतकार हुन् । पञ्चायतकालमा जनजागरणका गीत गाउने भएकाले उनलाई जनताका गायक समेत भन्ने गरिन्छ । केही समय रेडियो नेपालमा पनि जागिर गरेका रमेशले ‘बलिदान’ फिल्ममा संगीत गरेको ‘गाउँ–गाउँबाट उठ, बस्ती बस्तीबाट उठ…’ बोलको गीत निकै चर्चित र लोकप्रिय छ । केही नेकपा निकट व्यक्तिले उनलाई कूलपति बनाउन लबिङ गरिरहेको बुझिएको छ । केहीले भने उनलाई कूलपति भन्दा ठुलो सम्मान दिनुपर्ने माग समेत राखेका छन् ।